ग्रहचक्रमा शुक्रको परिवर्तन, यी ५ राशिलाई लाभ ! – hamrosandesh.com
ग्रहचक्रमा शुक्रको परिवर्तन, यी ५ राशिलाई लाभ !
भौतिक सुखको कारक मानिने ग्रह शुक्र ग्रह १७ मार्चको दिनबाट कुम्भ राशिबाट मीन राशिमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस राशिमा यो ग्रह १० अप्रिलसम्म रहनेछ। ज्योतिषशास्त्रमा शुक्र ग्रहलाई वृष र तुला राशिको स्वामी ग्रह मानिन्छ। शुक्र ग्रह मीन राशिमा उच्च रहन्छ भने कन्या राशिमा नीच रहन्छ। कुनै पनि ग्रहले आफ्नो उच्च राशिमा शानदार फल प्रदान गर्छ। शुक्रको यो गोचरले यी ५ राशिलाई उत्कृष्ट फल दिनेछ।
यो समयमा तपाईंले सरकारी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमाअ पदोन्नति र स्थान परिवर्तनको सम्भावना रहेको छ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने यसको लाभ लिन सक्नुहुनेछ। भूमि तथा वाहन सुख प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। आमा-बुबाको स्वास्थ्यको भने विशेष ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ।